एउटा ‘भर्जिन’ गाउँ (दश तस्वीर) - Himalkhabar.com
थप समाचारआइतबार, पौष ६, २०७१
एउटा ‘भर्जिन’ गाउँ (दश तस्वीर)
पर्यटक लोभ्याउने लमजुङको घले गाउँ जस्तै प्राकृतिक सौन्दर्य बोकेको छ ओखारी गाउँले ।
शब्द/तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, लमजुङमा
लमजुङको गौंडा–१ ओखारीका हरेक घर–आँगनबाट पश्चिममा अन्नपुर्ण–२ (७,९३७ मी.), लमजुङ हिमाल (६,९८३ मी.), उत्तर पश्चिममा मनास्लु (८,१५६ मी.), हिमालचुली (७,८९३ मी.) र बौद्ध हिमाल (६,७३६ मी.) का श्रृङ्खला देखिन्छ ।
ओखारीगाउँबाट देखिने मनास्लु, हिमालचुली र बौद्ध हिमाल ।
सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म टल्किरहने यो गाउँमा हिमालतिरै फर्किएका एकनासका घर छन् । ओखारी पुगेपछि थाहा हुन्छ– घले गाउँ, सिरुबारी वा बारपाक जस्तो पर्यटनमा ख्याति कमाइनसकेका ‘भर्जिन’ गाउँहरू नेपालमा अझै धेरै रहेछन् ।
ओखारीगाउँको पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण–२ र लमजुङ हिमाल ।
बेसीशहर र भोटे ओढारबाट पैदल ६ घण्टा लाग्ने ओखारी गाडीमा तीन घण्टामा पुगिन्छ । धेरै हिंड्न नसक्नेले उकालो जाँदा गाडीमा र फर्कंदा दोर्जी खोला र मस्र्याङ्दी नदीको तीरैतीर ओरालो पैदल यात्रा गरे हुन्छ ।
ओखारीगाउँ पुगेका पर्यटक ।
बाटोमा देखिने गाउँ, नागी र बादलले ढाकेको खोंचका दृश्यहरूले थकान मेटाइदिन्छ । ओखारीको दक्षिण पाटोमा रहेको मनझ्याङ गाउँको सौन्दर्यले पनि पैदलयात्रीको मन तान्छ । यो बाटो हिंड्दा आमा समूह, सोलार र लघु जलविद्युत्ले नेपाली गाउँघरमा ल्याएको चमत्कार पनि देख्न सकिन्छ ।
गाउँघरमा विकृति, विसंगति विरुद्ध स्थापना भएको ओखारी गाउँको मिलन आमा समूह सामाजिक काममा पनि सक्रिय छ । आप्mनै सामुदायिक भवन स्थापना गरेको समूहले १३ रोपनी जग्गामा अलैंची खेती गरेर यो साल मात्रै रु.७ लाख ३१ हजार कमाइ गरे ।
लमजुङको ओखारीगाउँबाट देखिएको अन्नपूर्ण–२ हिमाल ।
गाउँको जनहित सहकारीमा ठूलो शेयर आमाहरूकै छ । आमाहरूकै सक्रियतामा चिहान डाँडादेखि गाविस भवनसम्म तीन किमी सडक समेत खनिएको वडा संयोजक जयराम गुरुङ (४२) बताउँछन् । गाउँको आकर्षण बनेको गुम्बा निर्माणमा आमा समूहको पनि योगदान छ ।
आमा समूहकी अध्यक्ष जीतकुमारी गुरुङ र ओखारीगाउँ संयोजक जयराम गुरुङ ।
घरैपिच्छे जसो युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएकाले समूहलाई विदेशबाट आर्थिक सहयोग समेत आउने गरेको छ । गाउँघरमा पर्यटक आइहाले आमाहरूले नाचगान कार्यक्रम गरेर पनि सहयोग जुटाउने गरेका छन् । ६५ घरका आमाहरू आबद्ध समूहकी अध्यक्ष जीतकुमारी गुरुङ (४५) गाउँमा यत्तिकै बस्नु भन्दा सबै मिले धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको बताउँछिन् । भन्छिन्, “सबै मिलेर गाउँमा धेरै सुधारका काम गरिरहेका छौं । अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ ।”
ओखारीगाउँको मनमोहक दृष्य ।
ओखारीको बाटो भएर जोर्ने, इलम पोखरीहुँदै दूधपोखरी (४,७०० मी.) सम्म पुग्न सकिने भए पनि यो गाउँ कुनै पर्यटकीय रुट या गन्तव्यमा पर्न सकेको छैन ।
गाउँका संयोजक जयराम गुरुङ गाउँलाई ‘घले गाउँ’ जस्तै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनेबारे सोच्न थालिएको बताउँछन् । पर्यटकका लागि ‘होम स्टे’ सञ्चालन गर्ने र निरन्तर सरसफाइ गरेर ओखारीलाई सुन्दर पर्यटकीय गाउँमा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । भन्छन्, “हामीलाई प्रकृतिले धेरै दिएको छ । गाउँको स्याहार र सम्भार गरे मात्रै पनि पुग्छ ।”
घाँस बोकेर घर फर्कंदै बालिका ।